Beauty Archives - Page3of3- Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle
Shop Life: A Blog To Complete Your Lifestyle > All Articles > Beauty
Shhhh……Beauty Sleep!0193
Usman Ghani April 15, 2017 8:04 am April 15, 2017
အသားအရေလှပခြင်းရဲ့ အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုက အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ကော်လဂျင်အသစ်တွေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အတွက် အသားအရေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပျော်ပြီး ကျန်းမာလှပတဲ့ အသားအရေအတွက် Golden Milk လေးကို အိပ်ရာမဝင်ခင် သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အောက်မှာပြောပြပေးမယ်နော်…
အဆင့် (၈)ဆင့်သာလိုမယ့် လွယ်လွယ်ကူကူမျက်ခုံးပုံဖော်နည်း0308
Usman Ghani April 7, 2017 5:17 am April 7, 2017
မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် ပထမဆုံး ထင်းထင်းလင်းလင်းမြင်ရမယ့် အစိတ်အပိုင်းက မျက်ခုံးလှလှလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးကို ဘယ်လောက်ပဲဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ခြယ်ခြယ် မျက်ခုံးကို လှအောင်မခြယ်နိုင်ရင် သင့်ရဲ့မိတ်ကပ်က ပေါ်လွင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မျက်ခုံးလေးတွေကို သေသေချာချာပုံဖော်ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ အဆင့်လေးတွေအတိုင်း …
စတိုင်ကျလှပတဲ့ ဆံကေသာရဲ့ နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ?0198
Usman Ghani April 4, 2017 7:41 am April 4, 2017
ဆံကေသာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Martin Luther ရဲ့ ဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ “မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဆံပင်ဆိုတာက အကောင်းဆုံးအဆင်တန်ဆာတစ်ခုပါ” တဲ့။ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းဖို့အတွက် အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို နေ့စဉ်စားသုံးပေးဖို့လိုအပ်သလို ဆံပင်ကိုလဲ အလားတူ အာဟာရဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်ခေါင်းလျှော်ခြင်း၊ …
ဘယ်တော့မှရိုးမသွားနိုင်တဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံများ0175
Usman Ghani March 6, 2017 5:25 am March 6, 2017
Gradient lips ဒါကတော့ ကိုရီးယားကားတွေမှာ ပါနေကြဖြစ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းကို အရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့ အတွင်းသားလေးတွေကိုသာ ရဲနေအောင်ဆိုးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Lollipop ကိုစုပ်လိုက်ရင် နှုတ်ခမ်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံလေးအတိုင်း အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းပြီး သဘာဝဆန်တဲ့ ပုံစံလေးဖြစ်လို့ Celebrity တော်တော်များများနဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ …
အလှအပရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Argan သီးအဆီ0213
Usman Ghani February 12, 2017 10:05 am February 12, 2017
Argan oil က သံလွင်ဆီတို့ အုန်းဆီတို့လိုပဲ အာဂန်သီးကရတဲ့အဆီဖြစ်ပြီး “Liquid gold” “Moroccan oil” လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Facial oil တွေက အလှကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက်ထဲမှာ လူသုံးများလာတာနဲ့အမျှ အခြားအဆီတွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ …
အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ကတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Super Red နှုတ်ခမ်းနီကို ပထမဦးဆုံး စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ…0174
Usman Ghani October 7, 2016 7:24 am October 7, 2016
Shop Fashion Week 2016 ဖက်ရှင်ရှိုးဒိုင်ယာရီ0167
Usman Ghani March 30, 2016 8:46 am March 30, 2016
Shop.com.mm မှ Shop Fashion Week 2016 ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲကို Yangon Gallery တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Get your buying guides for 12.12 The World’s Biggest Sale 2020
What is the easiest way to get discount coupons in 12.12 the World’s Biggest Sale 2020?
Estelle on Can we call it “The Velvet” season?
K han on သငျ့ရဲ့ ဝါသနာကို အခုပဲရှာဖှလေိုကျကွရအောငျ….
Kyaw Phyo Aung on “Last Minute Gift Ideas for Your Dad On this Father’s Day”
Harsh Nathany on Are we being hit by the newest craze called fidget spinner?
U U Sai Sai on Are we being hit by the newest craze called fidget spinner?